Ngaba ubunzima bukaTrump besiya e-China ukuqala kokuwa kweedola kunye nokuwa kwezoqoqosho? : UMartin Vrijland
Ngokukhutshwa okulandelayo komgangatho wegolide kunye nomgangatho weoyile, idola yajika yaba yimali eza kuprintwa ngaphandle kwemida. Siyibiza ngokuba yimali yeFiat. Imali ye-Fiat ayilunganga kurhwebo lwamanye amazwe. Emva kwayo yonke loo nto, ukushicilela amakhulu ezigidi kubangela ukwehla kwemali.
Kungenxa yokuba ibhanki ephakathi yase-US (i-Fed) ilawula le nkqubo yokudala yedola kwaye idola ikumgangatho worhwebo lwamanye amazwe, oku kuthoba ixabiso ledola nako kunempembelelo ekunciphiseni kwezinye iimali, kubandakanya i-euro.
Ngexabiso lomgqomo weoyile okwethutyana ngokungahambi kakuhle (oko kwakuthetha ukuba unemali yokuthenga ioyile) kwiiveki ezisandula ukwenzeka, yinto entle ukuba ioyile ayisasebenzi. Ioyile iyakutshintshwa nguBill Gates into entsha yokudlala (ukukhanya kwelanga ukwenza i-hydrogen kwiinjini zomlilo).
Esona sizathu sokuba sisele yile nto kukuba akukho mgangatho-mkhulu-wokugubungela i-dollar ngumgangatho we-US hegemony (ukuza kuthi ga ngoku). I-NATO inyanzele ilizwe ngalinye okanye inkokheli ukuba iphambuke kwidola. Ihlala ingenelela ngeebhombu kunye neebhombu nokucoca inkokeli.
Yugoslavia 90s. Akunangxaki naliphi na ityala (ngedola ezimeleyo). Umkhosi owomeleleyo (ongenguye olilungu le-NATO kwaye nge-4 malunga namandla omkhosi emhlabeni). Emva kokubhubha kukaTito, abantu baqala ukubambana bodwa ukuze baqalise imfazwe eyayifanele itshabalalise ilizwe, bavumela i-IMF ukuba ingene kwaye iboleke imali yokwakha kwakhona (ukuxhomekeka kwedola).
I-Iraq, uSaddam Hussein wayefuna ukuthengisa ioyile kwi-euro. Coca ke.
I-Libya, Moammar Mohammed al-Qadhafi wayefuna igolide yase-Afrika engemva kwegolide ukuze ikhulule ukuxhomekeka kwedola. Tidy kwaye ndicocekile.
Ngoku ukuba imfazwe eSyria ibonise ukuba i-NATO (ithoyizi laseMelika) amandla ayisabalulekanga kangako, kunjalo ke nokuqala kokufika komgangatho wedola yehlabathi. Amazwe amaninzi ayajika e-US, kwaye impendulo kaDonald Trump kuphela ngumgca onamandla: iimfazwe zorhwebo. Kwaye ngoku - ngemeko ye-coronavirus - uyawa kwakhona ekuqhubekeni nokunyuka kwe-China. Kudliwanondlebe naye wokugqibela FOX News wazichaza nokuba ufuna ukwahlula onke amaqhina ne China.
Kwirekhodi, kuluncedo ukwazi ukuba urhulumente wase-China ukwazile ukugcina uqoqosho lwayo lungaphezulu okanye luphantsi kweedola ezimeleyo. Idola leyo yayisetyenziselwa urhwebo lwamanye amazwe kuphela, kodwa ibhanki ephakathi yaseTshayina isoloko ithenge iidola kwilizwe liphela kwaye ikwazile ukugcina i-yuan yaseTshayina yomelele ngaphakathi kwemida yayo.
Ukongeza, i-China inefuthe elikhulu kwezoqoqosho kumazwe amaninzi kwihlabathi jikelele kwaye iprojekthi yeChinese Belt and Road Initiative (i-BRI) iqinisekisa ukusebenzisana namazwe ayi-120 kunye ne-40 enkulu yeelizwe. Oko kwenza ukuba la mazwe kunye neenkampani zixhomekeke kakhulu kwi China.
Xa uDonald Trump ekhwaza esithi ufuna ukuyiphosa ngokupheleleyo i-China, ifana kakhulu nesenzo sangoku nje sokufuna amandla onamandla aphulukana nobugxwayiba. Ngelixa uTrump esenza ukuba umsindo wakhe unxulumene nendlela yeTshayina yokusondela kwintsholongwane ye-corona, esona sizathu sokuba edandathekile kungenzeka ukuba idola le izakuphulukana nomgangatho wayo wokurhweba emhlabeni kwaye i-yuan yaseTshayina ifumana umhlaba.
I-China yazisa enye ngaphakathi kwemida yayo imali ye-cyber entsha iindlela zokuhlawula: i-e-RMB (iRen Min Bi, elithetha 'imali yabantu'). Le e-RMB okwangoku iyavavanywa kwizixeko ezininzi zaseTshayina, kubandakanya iShenzhen, Suzhou, Chengdu neXiong'an. Kwezi zixeko, i-e-RMB iphantse yamkeleke jikelele kwiintlawulo zemivuzo, izithuthi zikawonkewonke, ukutya, kunye nokuthenga kwiivenkile ezininzi. Inkqubo ixhunyiwe kwi-WeChat kunye ne-AliPay (evela kwi-Alibaba). Le cryptocurrency intsha igutyungelwe yi-China Central Bank.
I-IMF iseke umgaqo-nkqubo wamaLungelo akhethekileyo okuDweba ngo-2016, apho "iimali ezindala" zenza uhlobo lokugcina lwenqanaba elitsha le-SDR. Ingxaki kweli phulo le-IMF, nangona kunjalo, kukuba iidola zenza i-41,73% yabelo ngaphakathi kweli nqanaba elitsha le-cryptocurrency, ngelixa i-Chinese yuan inesabelo se-10.92% kuphela (i-yen yen isi-8.33%, iphawundi yaseBritane nge-8.09%, i-euro engama-30.93%). Ke ngelixa uqoqosho lwaseTshayina sele luza kuba luqoqosho olomeleleyo emhlabeni, isabelo se-IMF crypto standard (i-SDR) sincinci ngokuchaseneyo.
Ke eneneni ikhona imfazwe yemali eqhubekayo; umlo ojikeleza ukubeka umgangatho omtsha wemali. Idola ibonakala ngathi ilahlekelwe amandla kwaye imeko ye-corona inike ithuba lokugqibela, njengoko umatshini wokushicilela imali ungazange uqhube ngokukhawuleza. Ngoku ngumzekeliso, kuba akusekho mali iprintiweyo. Kuphela linani lekhompyuter elinyusiweyo.
I-yuan yaseTshayina ibonakala isiba namandla, ngelixa iodola ilahlekelwa ngakumbi nangakumbi.
Umbuzo ngoku kukuba i-multinationals kunye neebhanki zifuna ukuhamba ukusuka kumgangatho wedola ukuya kumgangatho we-yuan okanye ngaba kuya kubakho uhlobo oluthile lomgangatho wegolide wamanye amazwe kwakhona. I-SDR njengenqanaba le-crypto ayibonakali lukhetho oluthembekileyo nokuba, kuba ngokuhla kweedola, leyo i-SDR nayo iwile nayo (ngenxa yesabelo sedola esiyi-41,73% kuloo SDR). Ke kuya kufuneka ususe impembelelo yemali ye-fiat (imali eprintwe ngokungapheliyo) njengesiseko senkqubo yezemali yamanye amazwe.
Idola ibonakala ngathi ifikelele esiphelweni ixesha layo. Uqoqosho e-US naseYurophu luya kubethwa ngamandla kwiinyanga ezizayo ziziphumo zentlekele. Amaxabiso kwizitolo ezinkulu sele esonyuka. Iinkampani ezininzi ziya kuwa ngaphezulu kwaye ngenxa yokuba amakhulu amawaka ezigidi eprintiwe, oku kuncitshiswa kwemali kuya kubonakala ngokukhawuleza kuye wonke umntu kwiinyanga ezizayo. Abantu abasenayo imali ethile baya kuqala ukukhathazeka.
Ngapha koko, imeko yentshabalalo ilangazelela iinkampani ezininzi kunye nabasindisi. Ngokuwa kweedola, igolide ibonakala njengezona ndawo zikhuselekileyo, kuba inani legolide emhlabeni lihlala lisetyenziselwa ukugubungela imali ngexesha lokusetha kwemali.
Nangona kunjalo, i-bitcoin nayo ibonakala ngathi iya ikhula inikezela indawo ekhuselekileyo. Ngoyikiso olunokubakho lweebhanki eziwayo (kuba iinkampani ezinamabhanki nabantu bangasakwaziyo ukuhlawula iimali-mboleko zabo okanye inzala kwezo mboleko), isoyikiso sokukhutshelwa ngebheyile kunye nokufakwa ibheyile kuhleli. Oku kuthetha ukuba urhulumente angayigcina ebhankini (funda: umrhafi) okanye imali esetyenziselwa ukugcina ibhanki.
Ke ngoko siya kubona indiza eqinile yemali eya kwi-bitcoin kunye negolide kwiinyanga ezizayo.
Kuqikelelwa ukuba indiza eya kwi-bitcoin iya kuba yeyona inkulu, kuba ungathengi golide ngokucinezela iqhosha. Uvule i-wallet ye-bitcoin akukho xesha kwaye yintoni esebhanki yakho namhlanje iya kuba kwi-bitcoin wallet yakho ngomso. Ukubaleka ukuya kwi-bitcoin, kudityaniswe nomgaqo-siseko wokusekwe kuwo, kunokwenzeka ukuba kunike i-bitcoin isikhundla esomeleleyo samazwe onke kangangokuba sinokuthi sithathe indawo yedola.
I-yuan yaseTshayina inokuthi igutyungelwe yibhanki ephakathi yaseTshayina, kodwa isizathu sokuba igolide isebenze njenge-backup kwihlabathi liphela ifihlwe kancinci kwinto yokuba kufuneka ucoceke igolide. Kuya kufuneka uyikhuphe emhlabeni ngomsebenzi wokumbiwa kwimigodi yegolide, eyinkqubo ebiza imali eninzi kwaye enobunzima kwaye kukho ukunqongophala. Umgaqo we-Bitcoin wokumbiwa usekwe kwimbono efanayo, njengoko kuchaziwe ngaphakathi eli nqaku.
Umthamo wokurhweba nge-bitcoin kwihlabathi liphela ngoku likhulu kangangokuba uninzi kunye nabantu abatyala imali banomdla kuyo kwaye bayangena kuwo. Ukuba ukongeza le nyaniso ekunciphiseni imali-ekuluhluhleni kwemali kunye nokuwa kweedola, kubonakala ngathi kubaninzi i-bitcoin iya kuba yindawo yokuhlala. Ke inakho ukubeka iseti entsha yamazwe kwaye ukuba idola iyawa, i-bitcoin ingayithatha ngokufanelekileyo indawo yedola kwimigangatho ye-IMF's SDR.
Uludwe lwekhonkco lovimba: Edition.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
Nangona iTump iqhuba iimfazwe zayo, i-yuan yaseTshayina ithatha isikhundla sedoli ngaphezulu nangaphezulu
Imbali ibonisa umjikelo weminyaka engama-90 kwaye zonke izikhombisi zibonisa ukwehla okunzulu akunakuchazeka
I-Venezuela ngumzekelo wezinto esizilindeleyo kunye neYurophu kunye nokuqaliswa kwe-cryptocurrency njengendlela esemgangathweni yehlabathi
Njengoko iTyump iphonsa ioli phezu komlilo waseNyakatho Korea, i-Jerusalem kunye neVenezuela, amandla okutshintsha empuma
tags: kwaye, nekliphu, Bitcoin, bri, iTshayina, Chinese, intsholongwane ye-Corona, ngxaki, dollar, i-RMB, eziziimbalasane, ukuncipha kwemali, nyathelo, indlela, SDR, ngexilongo, h, yuan
18 Meyi 2020 kwi-13: 22
Ngokoluvo lwam, siza kuqala ukubona ulwahlulo lwe-USD phakathi kwedola yamanye amazwe (petro) kunye ne-USD yendawo ye-USA ngokwayo. Ezokugqibela ziya kutya kakhulu, njengemeko efana neVenezuela. Ukwahlulahlulwa kwedola kuyinxalenye yokuseta kwakhona kwemali, njengoko ilizwe ngalinye lityale imali eninzi yabemi (kwimali yasekhaya, efana ne-Iniase rupees) kwimali mboleko yaseMelika kwinkqubo yayo yemali mboleko yebhanki yokuxhasa urhwebo lwamazwe lonke oluzinze kwi-USD. Amazwe ngoko ke akangekhe afune ukubona amabango awo e-USA z = ukuvela ngenxa yoxinzelelo, ke ngoko umbono woqhekeko. Ngaphaya koko, iChina inezinto ezingaphezulu kwesigidi sezigidi zamatyala e-US. Ukuba iChina ifuna ukungahambi kakuhle inokulahla ityala kwimarike kwaye ukuba akukho mfuneko, i-FED kuya kufuneka ithenge eli tyala elizakubangela i-hyperinflation e-USA. Umnxeba kaTrump onzima malunga neerhafu zemfazwe ke ngoko kubonakala kum ukuba linqanaba lokuba abantu abanyanzelekileyo basebenzise ukuseta imali kwakhona. Ungalibali ukuba ukuseta ngokutsha kwemali kuthetha ukuba ityala elininzi liza kucinywa, kuba ngokuseta kwakhona akukho nto ekubekeni amatyala amabi kwinkqubo yokubhanga kwinkqubo entsha. Nceda uqaphele, oku kuyakusebenza kwiqela elikhethiweyo kuphela kwaye kungekuko kubambiso okanye kubantu abanamatyala abucala, oku kuya kuqhubeka kwinkqubo entsha. Ndiyakholelwa kwakhona ukuba siza kubona umbulelo omkhulu wedola yamanye amazwe ngaphambi kokuba inyamalale enkundleni. Oku kunyuka kubangelwa ikakhulu kukufunwa kweedola ukuhlawula zonke izinto ezivelayo. Ndicinga ukuba eli iya kuba lixesha apho abadlali (iibhanki kunye neebhanki eziphakathi) beya kuthengisa amatyala abo aseMelika.
18 Meyi 2020 kwi-13: 55
IHydrogen luhlaziyo lwamandla oluzayo kwaye luya kubangela utshintsho lweparadigm. Ngaphandle nje kweempembelelo zoqoqosho ngqo, phantse zonke iimodeli ezisekwe kwimithombo yamandla yakudala zingashiya iwindow.
Imfazwe yommeli phakathi kwe China ne Melika sele iqhubeka kwaye izonyuka kuphela xa kusweleke umrhanelwa osandul 'ukubulawa wozakuzo wase China kwelizwe lakwa Israel kunye nezityholo zempilontle. Ukwakhiwa komkhosi kuLwandle lwase China China (Diego Garcia) nako kufuneka kubekwe esweni.
IHong Kong yayiyeyona nto iphambili kwi-CIA Otpor yokusebenza kwaye ngokuqinisekileyo iChina iya kuphendula ngendlela yayo xa ixesha lilungile.
19 Meyi 2020 kwi-12: 59
@salmon, izakuba yinto yexesha.
18 Meyi 2020 kwi-14: 45
Izongezo ezingaphezulu, i-TSMC yinkampani yaseTaiwan isibetho esibuhlungu kwiChina.
Esona siVumelwano sikhulu seChipmaker seHalfs esihanjiswa nguHuawei Njengezithintelo ezitsha zase-US
18 Meyi 2020 kwi-18: 13
18 Meyi 2020 kwi-18: 14
18 Meyi 2020 kwi-20: 17
18 Meyi 2020 kwi-22: 05
Iposta yase-Israel kwi-4 chan ithe uShin Bet, ongaphakathi kwa-Israeli 'Mossad', ubulele inxusa kwisicelo sase China emva kokuba uDu Wei ezame ukusilela nokusasaza ulwazi malunga neelebhu zase-China zokulwa nemfazwe, emva koko kwahlulwa kabini.
19 Meyi 2020 kwi-07: 58
Jonga ividiyo engentla kwi-ZIO ininzi kakhulu esengozini yabarhanelwa abaqhelekileyo.
21 Meyi 2020 kwi-16: 00
kuhle, ukrokrela okuqhelekileyo uBannon sele elindele ukungqubana okuzayo okuya ngqo kunye neChina.
IBannon WarRoom-Abemi beRiphabhlikhi yaseMelika
27 Meyi 2020 kwi-12: 53
I-Bannon ayikho ngaphezulu kwendoda ye-PR (Goebbels) kaTrump, badlala kwakhona abantu abadala ngokwemigaqo ye-Hegelian.
26 Meyi 2020 kwi-01: 24
Iqala ukubonakala ngakumbi njengecebo lobuchule apho ukulandelelana kubuyiselwe khona. Into endiyithethayo apha kukuba uhlangothi loqoqosho lubulala ii-SME kunye namanye amacandelo, kuba azisazodingeka, kwaye xa enokuhlisa icala libanga, umzekelo, izitofu. Ngokwesiqhelo, abantu baya kukhula kuqala kwaye kuya kubakho ababoneleli ngakumbi, okanye inani labantu liya kuncipha kwaye inani lababoneleli linciphe. Ngoku oku kubonakala ngathi kubuyisiwe.
« Nqamleza idemokhrasi indlela emfutshane esuka ekuvaleni nasekuvuseleleni uqoqosho
Awusenakungena esitolo ukuba awuniki gama lakho kunye nenombolo yekhoboka kwikhawuntala kwaye eso sisiqalo nje »
Utyelelo lulonke: 2.489.741